Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Norrbottens län / Piteå
Waa meeshaan meesha la yimaado marki guriga la yimaado. Waa aragtida degmada iyo wax aan rajaynayno in ay dareemaan shacabka halkan marki ay yimaadaan. Piteå waa magaalo raaxo leh, magaaladu na waa nabad una dhaw kaymo iyo jasiirad.
4,640 kiilomitir oo laba jibaaran
Luleå 55 kiilomitir
Skellefteå 79 kiilomitir
Umeå 213 kiilomitir
Xilliga jiilaalka waxaa la hagaajiyay jidka barafka si loogu ciyaaro ciyaaraha barafka looguna lugeeyo. Sawirka: Krister Berg
Halkan waxaa jira noocya badan oo musik ah, munaasabado iyo hawlaha waqtiga firaaqada ah la qabto. Waxaa ah warshado badan oo waaweyn, meelo lagu dalxiiso iyo weliba shirkado waaweyn iyo yaryar isugu jira oo qaybo kala duwan ah.
Piteå waxay leedahay meelo fiican oo loogu talogalay qofka doonaya inuu ku noolaado oo ag joogo badda. Magaaladan u dhawaanshaheeda biyaha waxa kale oo ay siisay muuqaal fiican oo magaalada ah. Sawirka: Angelica Larsson
Dabbaaldegyo caalami ah ayaa mararka qaarkood lagu qabtaa looguna talogalay kulamo cusub iyo is-weydaarsiga cunto, muusig iyo daansi. Sawirka: Ann-Sofie Boman
Piteå waxaa ku yaala dhowr dukaan oo iibiya waxa la soo isticmaalay dhanka dharka, alaabta guryaha, maacuunta iyo waxyaabo kale oo badan. Meel in loo lugeyn karo u jirta xarunta magaalada waxaa ku taala tusaale ahaan Laan Qayrta Cas dukaankeeda Kupan. Sawirka: Angelica Larsson
Piteå Summergames waa tartanka labaad ee ugu weyn Iswiidhan oo waxaa iska diiwaan-geliya ku dhawaad 800 kooxood. Waxaa la qabtaa sanad kastaba gudaha Juun oo run ahaantii waa bandhig bulsho Sawirka: Krister Berg
Jardiinooyinka biyaha ee Piteå waxay ka koobanyihiin qiyaastii 500 jasiiradood. Pite-Rönnskär maanta waa meel dalxiis xilliga xagaaga lehna taariikh xiiso leh sida goob kaluumeysi, xarunta doonyaha iyo noobiyad. Sawirka: Lena Berggren
Piteå waxaa ku yaala xanaanooyin ay degmada leedahay, xanaanooyin gaar looleeyahay iyo xanaano kale oo ay furteen waalidiin iskaashatay. Qaar ka mid ah waxaa loo yaqaan Reggio Emilia iyo Montessori, mid xanaanada ka mid ah waxa ay diirada saartaa howlaha firfircoonida ee dibada iyo howlaha dibada. Waxaad boos ka dalbankartaa waaxda waxbarashada. Wixii intaa sii dheer oo ku saabsan xanaanooyinka k aaqriso boga interneetka ee degmada Piteå.
Sanadka nuskiisa xilliga xagaaga ee Piteå waxay ku astaamaysantahay cad-ceed iyo dabaal badan, munaasabado farxad leh iyo habeeno xagaa oo dhaadheer oo iftiin leh. Sawirka: Krister Berg
Waxaa ku yaala labo dugsi sare ah. Strömbackaskolan wuxuu bixiyaa barnaamijyo badan oo caalami ah iyo barnaamijka soo bandhiga. Waxaa kale oo ah barnaamij qaadasha qaranka – cayaaro iyo warshadaha wax rakiba. Gransnaturbruksskola wuxuu bixiyaa waxbarasho dugsi sare oo dhinaca beeraha iyo xoolaha ah iyo barnaamijka soo bandhiga.
Dhamaan 46 maktabadood ee ku yaala Norrbotten way shuraakoobeen taas oo dadka wax amaahda siinaysa 1 228 959 cinwaan oo kala duwan iyo fursada in buug laga amaahdo Boden oo ka dib dib loogu celiyo Piteå. Sawirka: Angelica Larsson
Dhamaan ajnabiga iswiidhen yimaada waxaa loo dhigaa isdhexgalka bulshada sida ay iswiidhan u shaqayso.Taana waxaa isku daba rida waaxda ajnabiga qaabisha.
Waxbarashada dadka waaweyn Iswiidhiska soo galooytiga Dugsiga dadka waaweyn Luleå Tekniska Universitet
Piteå waxaa ku yaala isbitaal, isbitaalka Piteå älvdals lehna dhowr qaybood oo daryeel iyo rugta qaabilaada deg-dega. Degmadan waxaa ku yaala shan xarumood oo caafimaad oo uu wado maamulka gobolka iyo mid laga wado maamul baraayfad ah. Dhowr ka mid ah waxaa laga helaa ruggaha caafimaadka hooyada, rugta daryeelka caruurta iyo daryeelka tababarka jirka marka xanuun jiro.
Degmada waxaa ku yaala shan xarumood oo daryeelka ilkaha ah, hal xarun oo taqasuska ilkaha ah iyo shaybaarka ilakaha. Waxaa kale oo jira kuwa ku taqasusay daryeelka ilkaha.
Tariin isteeshinka ugu dhaw waxa uu ku yaala Älvsbyn iyo Luleå, waqtiyada tariinka waxa aad ka helaysaa sj.se. Garoonka diyaaradaha ee Luleå ayaa ugu dhaw garoon diyaaradeed waxaana ka baxa diyaarado badan oo Stockholm iyo meela kale u kala socda.
Småstaden, mid ka mid ah labada xarumood ee dukaamada waaweyn ee magaalada lehna doorasho dukaamo badan iyo maqaaxiyaha kafeega iyo xitaa shaneemo ku taala dabaqa hoose. Sawirka: Angelica Larsson
Citybuss Länstrafiken Norrbotten SJ Gego diyaaradeed
Jidka Storgatan wuxuu u badanyahay jid dadku maraan, waa ka ugu qadiimisan Iswiidhan iyo goobta dukaamada ee ugu muhiimsan xarunta magalaadan. Sawirka: Richard Kårström
Shaqooyinka ka banaan gudaha Piteå